Sida loo cusbooneysiiyo LG G2-keeda qalabka ugu dambeeyay ee Yurub | Androidsis
Maanta waxaan rabaa inaan kuu sharxo talaabo talaabo, habka cusbooneysii LG G2, kaliya qaabka caalamiga ah D802, ilaa Qalabka ugu dambeeyay ee yurubiyanka ah ee ka yimid LG iyo hawlwadeenku bilaa lacag. Gaar ahaan qalabka qalabka ayaa ah D80220H oo waxaan leenahay laba nooc oo la heli karo, mid ilaaliya xididka iyo Soo kabashada wax laga badalay, iyo tan labaadna ka saar xididka iyo soo kabashada labadaba si aad uga tagto nadiif ahaanta oo diyaar u ah cusboonaysiinta suurtogalka ah adoo adeegsanaya OTA nooca cusub ee Android 5.0 Lollipop LG asalka ah mar la geeyo bil ama saddex bilood gudahood.
Nidaamka aan halkaan ku sharxi doono ayaa ah midka ugu fudud tan iyo markii ay tahay a KDZ asal ah oo ka yimid Open Europe nooca D80220H, loo beddelay qaab ZIP ah rakibid fudud oo laga soo rogay Soo-kabashada wax laga beddelay, Aniga qudhaydu si guul leh ayaan uga rakibay TWRP Recovery 2.8.1.1 oo ka socda Rom Optimus RS 1.4.
Kahor intaadan sii wadin casharradan wax ku oolka ah waa inaad ogaataa taas tani waxay kaliya ku habboon tahay nooca LG G2 D802 loo yaqaan moodel caalami ah. Anigana waxaan sharaxayaa waxay noqon laheyd lagama maarmaan u ah in laga bilaabo Rom Stock wax kastoo saldhiggaaga ah, JB ama Kit Kat, adigoo ka gaabsanaya inay si toos ah uga sameeyaan AOSP ROM ama non-Stock ROM.
1 Shuruudaha lagama maarmaanka ah kahor dhalaalka ROM-kan
3 LG Open Europe D80220H habka rakibaadda qalabka rasmiga ee asalka ah
Shuruudaha lagama maarmaanka ah kahor dhalaalka ROM-kan
LG G2 moodeelka D802 oo keliya iyo si gaar ah.
Terminal xididaysan iyo haysashada Soo-kabashada la beddelay.
Kaydinta faylka EFS iyo nandroid Backup.
Kaydinta codsiyada iyo xogta in aan dooneyno inaan ilaashano maadaama howsha biligleyga wax walba tirtirayno, marka laga reebo xusuusta gudaha ee LG G2.
Waxaan haynaa laba fayl oo ZIP ah oo aan hayno, midna gebi ahaanba uga tag warshadda iyadoon lahayn xidid ama soo kabasho wax laga beddelay, Waxaan ula jeedaa Soo-kabashada asalka ah ee LG ama Soo-celinta Soo-kabashada ee aan ka soo dejisan karno halkan.
ZIP labaad oo loogu talagalay dhammaan dadka doonaya u cusbooneysii qalabkaan cusub ee yurubiyanka ah, shaqaale la'aan laakiin cdayactirka soo kabashadayada wax laga badalay iyo ilaalinta rukhsadaha. Kaas oo aan halkan kala soo dagsan karno.
Mar alla markii aan dooranno ZIP-ka na daneeya, waa inaan doorannaa oo keliya nuqul ka sameyso xusuusta gudaha ee LG G2 si aad u cusbooneysiiso oo aad dib ugu bilowdo habka Soo-kabashada si aad u raacdo kuwan D80220H rakibida qalabka firmware iyo tallaabooyinka biligleynaya:
LG Open Europe D80220H habka rakibaadda qalabka rasmiga ee asalka ah
Ka soo kabashada wax laga badalay waxaan raaci doonaa talaabooyinkan fudud:
Waxaan aadeynaa xulashada Masax oo xulo wax walba marka laga reebo xusuusta gudaha ee LG G2 ama SDcard Gudaha.
Waxaan aadeynaa xulashada Ku rakib oo waxaan u marnaa dariiqa aan koobiyeynayno Furan Europe D80220H firmware ZIP.
Waxaan u dhaqaaqeynaa baarka si aan u fulino ikhtiyaarka la codsaday oo waxaan si dulqaad leh u sugeynaa siibku uu u dhammeeyo biligleynaya.
Ugu dambeyntii waxaan dooranaynaa ikhtiyaarka Reboot Systen hadda oo waxaan sugeynaa inta dib loo bilaabayo LG G2 nooca D802 na tusaya firmware cusub oo ugu dambeeyay Open Europe D80220H.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » LG » Sida loo cusbooneysiiyo LG G2-keedii ugu dambeysay asalka Yurub ee D80220H
Waa salaaman tahay Francisco, waan ogahay inaysan shaqo ku laheyn boostada, laakiin waqtiga casharka ah "Sida loo rakibo dib u habeynta iyo xididka Bq Aquaris E6" wax weyn ayey ka tari laheyd, horay u mahadsanid, salaan
Wixii d 805 ikhtiyaarkan ma jiro? Si loogu diyaariyo nacnaca? Iyo shay kale oo kaliya g2 kaygu wuu rogay laakiin macno ahaan wuu i baqay .. inaan sameeyo wax kale oo noqon kara wax soo kabashada, sideen ku sameeyaa taas si nabad ah? Waxaan rabaa in aan galiyo romas laakiin asal ahaan waan xidid ahay, maxaan kaloo ubaahnaan lahaa
«Markaa, waxaan sharxayaa inay lama huraan tahay in laga bilaabo Rom Stock ... ´´ maxaad uga jeeddaa tan? Mahadsanid.
Ku jawaab dani94226
Hello Francisco, aan kuu sharaxo, soo degso romkaan waxyar ka hor oo waxaan ku keydiyey pc-kayga, kiisku wuxuu yahay waxaan go'aansaday inaan isticmaalo, waxay laheyd casrigii ugu dambeeyay ee twrp wuxuuna ka yimid claudyg3 rom, xaqiiqadu waxay tahay anigoo soo degsaday inyar ka hor maanan xasuusan maxaad ku leedahay qoraalkan ku saabsan ku rakibida haddii aad leedahay rom caadad ah, markaa waan rakibay hadana waxaan haystaa megabrick. : - \_
Unuggu wuu daarayaa wuxuu dhigayaa astaanta LG oo wuu soo laaban doonaa wuxuuna dib u bilaabayaa isla markaana soo celinayaa isla meertadii, ma lahan wax soo kabasho ah ama keyd ama midii ay laheyd markii aan isku dayo inaan ku dhigo qaabka dowloader-ka ma galo ee waa i tuura khaladaadka qaar kadibna shaashadda ayaa madoobaata laakiin madow waxaan u baahanahay caawimaad Ma aqaano waxa la sameeyo caawimaad !!
Javier, weli waan joogaa, waxaan ku xallin lahaa dhibaatadaada taleefankaaga gacanta
Iga raali noqo walaal, romkaankan yurubiyanka ah ma 4g baa lagu kartiyeeyaa?
Ku jawaab falcelin
Waxaan kuu sheegayaa Francisco in aan horey u soo dajiyay wax walbana waa hagaagsanyihiin laakiin mobilka wuxuu ku siijiraa astaanta lg, fadlan ma hagaajin kartaa maxaa yeelay waan xiiseynayaa maxaa yeelay waxaan rabaa in shabakada 4g ay soo baxdo maadaama kuweyga uusan laheyn, waa waa midka keena romka imaaraadka carabta. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay oo waad sugeysaa
Waad salaaman tihiin, subax wanaagsan dhamaantiin, waxaan su'aal ka qabaa, nooca sw ee cusub, midka d80220h ama d0b ee lg g80220, ayaa ah inuu dhameystirmay oo aan helay taleefanka oo aan rakibay h, aniguna waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado kan cusub ee cusub, haddii ay dhacdo inaan dib ugu noqdo b, mahadsanid jawaabahaaga.
Ku jawaab lolek krochasnikov
Amarka xarfaha ayaa ku siinaya jawaabta, H wuu ka cusub yahay B.
Sii midab badan nambarkaaga darbiyada leh Papuh Walls